Iincwadi ezinamaqweqwe amahle | Abadali be-Intanethi
Encarni Arcoya | 31/03/2022 23:03 | Ukuhlaziywa ukuba 31/03/2022 23:47 | Ukuphefumlelwa
Enye yezona zinto zibalulekileyo zencwadi liqweqwe lwayo.. Ngayo, abafundi abanokuba ngabafundi bayabanjwa. Kwaye kukuba, ukuba ingena ngamehlo, unamathuba amaninzi okumenza ukuba athathe incwadi, afunde i-synopsis kwaye abe nomdla wokuyifunda. Ke ngoko, ukuba ungumyili wegraphic okanye umbhali kwaye ufuna ukuthengisa incwadi yakho kakuhle, iqweqwe yeyona nto iphambili. KUNYE iincwadi ezinamaqweqwe amahle zininzi.
Enyanisweni, apha ngezantsi siza kukubonisa ezinye zazo, zombini kunye nezindala. Yindlela leyo unokuphefumlelwa kwaye uyazi ukuba kufuneka ujonge ntoni ukuphumeza isiphumo esifanayo esiphunyezwayo ngezi. Uyafuna ukubona ezinye?
Kuba sisazi ukuba ukuziqhelanisa kokona kulungileyo, asizukwenza ukuba ulinde ixesha elide kwaye apha sibonisa ezinye zeencwadi ezinamaqweqwe amahle esiwafumene kuGoogle. Ukuba unomntu oye wakufowunela, uyazi ukuba kwiikhomenti ungasibhalela. Ziphose kuyo!
1 Iincwadi ezinamaqweqwe amahle: Imeko engaqhelekanga kaGqr Jekyll kunye noMnu Hyde
2 Ikhefu lokulibala
3 Iwotshi yewotshi
4 isango lehlathi
6 Impumelelo yesizwe
7 Ukuguqulwa kwemizimba
8 Kutheni amaqweqwe abalulekile
8.1 Yonke into kufuneka ibe nekhava
Iincwadi ezinamaqweqwe amahle: Imeko engaqhelekanga kaGqr Jekyll kunye noMnu Hyde
Ngokukodwa, sibhekisa kuguqulelo loHlelo lweLibros del Zorro Rojo. Lelinye lawona makhava abalaseleyo ka-2020 kwaye inyani yile ukuba ukhangele ngokukhawuleza, izithunzi ezenza i-silhouettes zabalinganiswa zichazwe kakuhle kwaye zinika intsingiselo koko uya kukufumana kuyo.
Le ncwadi iphinde yaphuma ngo-2020 kwaye ibhalwe nguSiruela. Ukuba ujonga iqweqwe, limhlophe qhwa kunye nesihloko esikhulu kancinci kunombhalo ongezantsi, kuwo onke amanqwanqwa. Kukwanjalo nakumbhali. Kodwa, phakathi kwazo kukho iindlela ezinomdla.
Ekuqaleni kunokwenzeka ukuba aniqondi ukuba libeka ntoni na elo gama, likukulibala. Kwaye kukuba, ngokutsho kwencwadi, ixesha libangela ukuba silahlekelwe iinkumbulo, ukuba asikwazi ukukhumbula yonke into 100%. Kwaye oko kuye kwenziwa kwiqweqwe.
Le yenye yeencwadi ezinamaqweqwe amahle onokuwafumana. Kwaye inakho konke. Ukusuka kwindlu yokupapasha iNcwadana, isinika incwadi engemvelaphi eorenji enegama lombhali ngasentla kwaye, ezantsi nje, enkulu kunye nenesithunzi, kunye nefonti enomdla, isihloko.
Kodwa eyona nto imangalisayo kukuba imvelaphi e-orenji yaphulwe ngonxantathu apho umzobo womntu unento ethile ebonakalayo: umnqwazi wesitya kunye ne-eyelashes enomdla.
Sikhethe le noveli kwindlu yopapasho ye-RBA Molino kuba uqweqwe ngokwalo luthetha lukhulu. Enyanisweni, nanini na xa uyijonga uya kufumana izinto ezintsha, okanye iimbono ezahlukeneyo. Kuyo uneengcango ezithile kwaye kuzo ziphuma njengezinyuko, imithi eyenza umzobo wesibhozo. Kodwa ngeenxa zonke kukho izinto ezininzi esingathandabuzekiyo ukuba ziya kunxulumana nebali.
Ukusuka kwindlu yopapasho yeAnagram. Phantse zonke ezi ncwadi zidla ngokuba neqweqwe elinye, elinemvelaphi emthubi nesikwere embindini lowo uyilelwe incwadi nganye. Kule meko, bakhetha ukubeka udonga lwezitena. Ihamba nebali ngenene.
Kodwa bongeza amabinzana akwizitena ezithile abonisa oko umfundi aza kukufumana. Sinokuthi ngamabinzana amagwegwe; endaweni yokusebenzisa enye babeke ezininzi.
Kwaye bafuna ngazo ukubamba loo mfundi.
Lo msebenzi kaJM Ponce, ophuma kwindlu yopapasho yaseGlénat, luqweqwe olungaphaya. Kwaye kukuba, xa uyibona okokuqala, ucinga ngenkomo ye-Osborne ebekwe entabeni okanye into efanayo.
Ewe, xa ujonge kufutshane, uqaphela ukuba imilo enomdla yentaba, ekhangeleka ngathi yimpundu yabasetyhini. Kwaye kunjalo inika kuqala umfanekiso phambi kwesihloko, esinokungaqatshelwa, kodwa alithandabuzeki elokuba iqweqwe liyafowuna. Gcina ukhumbula ukuba phantse yonke into enxulumene nobunqunu yenza.
Siza kugqiba ngencwadi yoHlelo luka-Alianza La metamorfosis, nguFranz Kafka. Kungumzekelo wokuba ubone ukuba isigqubuthelo asisoloko sihamba nomfanekiso. Ngamanye amaxesha amagama ngokwawo anele.
Kule meko bona igama elithi Metamorphosis izihlandlo ezininzi, kodwa ukuba ujongisisa, kukho isithunzi elithi, ngegama ngalinye, likhule libe likhulu. Inceda ngantoni? Ewe, uya kuqala ngomlinganiswa kwaye uya kubona indaleko kunye nendlela etshintsha ngayo.
Ngapha koko, umdla kukuba, xa ulibonile iqweqwe, uya kucinga ukuba le ncwadi ibizwa ngokuba yiMetamorphosis hayi iMetamorphosis. Kwaye kukuba okuphambili kunikwe elo gama lesibini kwaye lelo ligcinwe kwinkumbulo yethu.
Kutheni amaqweqwe abalulekile
Omnye iqweqwe lifana nembonakalo yomntu yokuqala. Xa umbona, ngokumjonga nje, uyazi ukuba unomdla okanye akunjalo. Nokuba uyatsaleleka kuyo okanye awuyithandi. Kwaye oku kubaluleke kakhulu ukuba namathuba amaninzi okuthengisa.
Kodwa ukongezelela, amaqweqwe asisishwankathelo seyona ncwadi ibalulekileyo. Kulilize ukubeka iqweqwe elihle kwincwadi xa umbandela ozawuphathwa ukruqulayo. Okanye ayinanto yakwenza naye. Ekuphela kwento ephunyezwayo kukuba umfundi uziva eqhathiwe, kwaye endaweni yeembono ezilungileyo, ubeka umngcipheko ezimbi.
Yonke into kufuneka ibe nekhava
Ukuba ufuna ukwenza isigqubuthelo esihle esigqibeleleyo, kukho izinto ezininzi ongenakuzilibala. Zezi:
Igama lombhali. Oko kukuthi, umntu owabhala loo ncwadi. Isenokuba ligama lokwenyani okanye isifaniso.
Isihloko sencwadi. Kule meko ifana okanye ibaluleke ngaphezu kombhali. Enyanisweni, isihloko siya kuhlala sisikhulu kunesombhali. Kuphela kwizihlandlo ezimbalwa kuye kwabonwa ngenye indlela (ngokuqhelekileyo kuba ligama lombhali elithengisa kungakhathaliseki ukuba ibali alibhalayo).
Umhleli. Ukuba unayo. Ngokuzipapasha ngokusondeleyo kunye nethuba lokufumana ngaphezulu simahla kunokupapasha, ndazise kumaxesha amaninzi adlulileyo.
Ngamanye amaxesha kuya kubakho isihloko kunye nesihlokwana. Okanye ibinzana hook. Ezi ziya kuhlala zihamba kunye nobukhulu obuncinci befonti kuba abafuni ukugqama kakhulu, nangona betsala umdla.
Sisenokuba sikunika imizekelo kangangeeyure kuba inyaniso ikukuba zininzi iincwadi ezinamaqweqwe amahle. Kodwa ngoku sikushiyela ukuba ucebise iincwadi ezikhava owuthandileyo okanye ozikhuthazileyo ukwenza iiprojekthi zakho. Ukhululekile ukuba uphawule kuthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » iincwadi ezinamaqweqwe amahle